Ra’iisul wasaare hore Oo lagu Helay Toddobo Dembi | Gaaroodi News
Kiiskan ayaa loo arkayay mid tijaaba u ah dhaqan-galka sharciga dalkaas iyo dedaalada looga hortagayo musuqmaasuqa.
Fadeexadda la xiriirta kiiskan ayaa la aaminsan yahay inay bannaanka soo dhigtay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq baahsan oo la sheegay in sanadihii dambe ay ka jirtay gudaha dalkaas.
Dembiga lagu helay ayaa sharciga dalkaas waxaa uu dhigayaa in uu ku muteysan karo 15 ilaa 20 sano oo xarig ah. Kahor inta aanan lagu dhawaaqin, Najib waxaa uu sheegay in haddii dembi lagu helo uu racfaan ka qaadan doona.
Lacagta la lunsaday ayaa ahayd mid loogu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha wadankaas, waxaana laga soo uruuriyay shacabka wadanka Malaysia.
Sanadkii 2015-ka, dowladaha Malaysia iyo Mareykanka waxay sheegeen in lacag dhan 4.5 bilyan oo doollar laga soo bixiyay qasnadaas, lacagtaasina ay gashay jeebka shakhsiyaad.
Lacagahan la lunsaday ayaa la sheegay in lagu iibsaday guryo, diyaarado gaar ah iyo waxyaaba kale. Intii uu xilka hayay, Najib waxaa laga nadiifiyay dhammaan dembiyada haatan lagu helay.
Haseyeeshee eedeymaha xilligaas loo jeedinayay waxay qeyb weyn ka qaateen arrimaha doorashooyinka, waxana markii ay timid dowlad cusub lagu bilaabay baaritaan la xiriira arrintaas.
Sidoo kale xaaska Najib Razak, Rosmah Mansor ayaa iyaduna wajaheysa wax isdaba marin iyo in ay la dhuumatay canshuur la rabay inay bixiso, eedeymahaas oo ay sheegtay in aysan gelin